Tag: cookies | Martech Zone
Miaina anaty fiovan'ny paradigma manerantany isika, izay misy ny ahiahy momba ny fiainana manokana, ampiarahina amin'ny fahafatesan'ny cookie, dia manery ny mpivarotra hamoaka fanentanana manokana sy feno fangorahana, ao anatin'ny tontolo azo antoka. Na dia manome fanamby maro aza izy io, dia manome fotoana maro ihany koa ho an'ireo mpivarotra hamaha tetika fitadiavana valim-panafahana manan-tsaina kokoa. Miomana amin'ny ho avy tsy misy cookie na ny mpanjifa tsy mitsaha-mitombo amin'ny fiainana manokana izao dia mandà ny cookie an'ny antoko fahatelo, miaraka amin'ny tatitra tamin'ny taona 2018 izay nanambara fa 64% ny cookies no nolavina, na
Dingana 3 mankany amin'ny paikady nomerika matanjaka ho an'ireo mpanonta izay mampiroborobo ny fifandraisana sy ny vola miditra
Alarobia 26, 2020 Alarobia 26, 2020 Jeff Kupietzky
Rehefa nifindra bebe kokoa amin'ny mpanjifa vaovao an-tserasera ny mpanjifa ary manana safidy maro hafa azo atao, dia hitan'ny mpanonta pirinty ny fidoboky ny volany. Ary ho an'ny maro, sarotra ny nifanaraka tamin'ny paikady nomerika izay tena mandeha. Lozam-pifamoivoizana no nanjo ny Paywalls tamin'ny ankapobeny, nanosika ny mpamandrika handeha ho amin'ny habetsaky ny atiny malalaka. Nanampy ny doka aseho sy ny atiny tohana, fa ny programa mivarotra mivantana kosa dia miasa mafy ary mandany vola, ka mahatonga azy ireo tsy ho azon'ny
Maninona ny GDPR no tsara amin'ny dokambarotra niomerika
Talata, Jona 26, 2018 Talata, Jona 26, 2018 Larry Harris
Ny lalàna mifehy ny lalàna ankapobeny antsoina hoe General Data Protection Regulation, na GDPR, dia nanomboka ny 25 mey lasa teo. Ny fe-potoana dia nahitana mpihetsiketsika dokam-barotra nomerika maro niady varotra ary maro hafa no natahotra. Ny GDPR dia handoa tolotra iray ary hitondra fanovana izany, saingy ny fanovana dia tokony horaisin'ireo mpivarotra dizitaly fa tsy tahotra. Ity no antony: End ny Pixel / Cookie-based Model dia tsara ho an'ny indostria Ny zava-misy dia efa ela loatra io. Notaritaritin'ny orinasa ny tongony, ary